Nezve Corporation Mhando, C & S, Nyanzvi uye Isiri-purofiti
﻿﻿Sangano ibazi repamutemo iro rakagadzirwa sechinhu chakaparadzaniswa kubva kuvaridzi varo kuburikidza nekunyorwa kwemapepa akakodzera nenyika iyo mubatanidzwa uchaumbwa. Ichi chinyorwa chinozivikanwa se "Zvinyorwa zveInorporation," uye ndipo panobva izwi rekuti "mubatanidzwa". Kugadzirwa kwechikamu chebhizinesi chakaparadzaniswa, kana kupatsanurwa zviri pamutemo pakati pekambani nevaridzi vayo (inozivikanwawo se "vagovana"), inoshanda kudzikisira chisungo kune varidzi nekupa simba mukambani nekugona kutanga chikwereti, kutora midziyo, uye kupinda muzvibvumirano zvinoenderana nezvakakodzera. Nekuti izvi zvinogona kuve zvikwereti zvinoitwa nekambani, uye kwete nevaridzi vega, chero zvikwereti zvinomuka nekuda kwekushanda kwesangano ibasa rakananga rekambani; izvi zvinoshanda kuchengetedza zviwanikwa zvemunhu ane shareholder kana vakuru vekambani. Ichi chikwereti chakaganhurwa chiri pakati pezvikonzero zvakakosha izvo varidzi vanosarudza kuisa, sezvo zvichishanda kudzikisira zvakanyanya mutoro wega uye njodzi kuzvinhu zvako nevaridzi.
Zvimwe zvikonzero zvakakosha kuti makambani aumbwe ndeye nekuda kwemamwe mutero mabhenefiti, muripo uye mibairo mibairo, kuwedzera kutendeka kwekambani pamwe nevanogona kuisa mari, uye nenzira yakafanana, kukwezva vatengesi. Nekuti vanogona kuve varimimari vanoziva kuti chikwereti chavo uye kuratidzwa kunowanzo kuverengerwa kuhuwandu hwekudyara kwavo, kuisa mari mukambani kungave kune njodzi shoma pane kudyara zvakananga mune rimwe bhizinesi bhizinesi.
Kana danho rekuumba mubatanidzwa rasvika, paine mamwe matanho akakosha uye anodikanwa ekutora kuti uone kuti zvinangwa zvekambani ine hutano, uye nemutero wakadzikisira varidzi vayo, zvinosvika. Mukuru pakati peizvi ndiko kucherechedzwa kwemakambani. Unogona kutsvaga ino saiti kuti uwane kutsanangurwa kwakadzama uye kwakadzama kweaya maratidziro, asi muchidimbu, iyi ndiyo "mitemo yekushanda" yakakosha iyo inofanirwa kuve nechokwadi chekuti mubatanidzwa unochengeta chimiro chayo chakazvimiririra chepamutemo, uye inotorwa se dzakadai nezvimwe zvinhu (zvakavanzika uye zvehurumende). Aya maratidziro anosanganisira kugadzwa kweMumiriri Akanyoreswa, kugadzwa kwenzvimbo dzevakuru mumakambani, kusarudzwa kweBhodi revatungamiriri, kuchengetwa kwemapepa akakodzera emakambani, kuita misangano yakakosha yegore, nezvimwe.
Kunyangwe kumisikidza chinzvimbo chekambani kusiri mukati uye pachezvaro rakaoma basa, hanya inofanira kutorwa kuti matanho akakodzera uye matanho, kusanganisira kutsvaga uye kugamuchirwa kwemazano akanaka, anotorwa kana kuchitsvaga kumisa mubatanidzwa. Kupinza kunogona kuve iri nhanho yepamusoro yepamutemo yekutora kana uchitsvaga kutora bhizinesi rako kuenda padanho rinotevera.
Chikwereti Chikwereti cheVashandi
Imwe Mitero Inobatsira
Mukurumbira weBhizinesi neVashandi Mahofisi
Kugona kukwidza capital uye kukwezva vanoita mari
Chinhu chikuru chakakanganisika nekambani yechinyakare idambudziko rinotyisa rekuti "mutero wakapetwa". Yetsika C Corporation inobhadhara mutero kune ese emakambani (bhizinesi) mari, ipapo kana kupihwa kupihwa kune vagovana, ivo wega masheya vanobhadhara mutero wemari zvakare pane izvi zvinogoverwa (kana zvikamu). Imwe nzira yekudzivirira iyo mbiri mutero dambudziko ndeyekumisikidza mubatanidzwa se "pfuura nepakati" mubatanidzwa senge mubatanidzwa umo mari dzese dzemakambani dzinopfuura dzichienda kune mumwe neumwe mugovani uye ivo vanobva vatora mutoro mutero. Sangano rakagadzira sarudzo kuti ribatwe nenzira iyi (nekuita mafirita akakodzera uye kuita zvinodiwa) inozivikanwa se "S Corporation."
Kukanganisa kweC Corporation
Kaviri Mutero gomba (inogona kudzivirirwa neakafanira accounting)
Kukosha kwekudzidzira maitiro emakambani
Kubatanidza ndeimwe yematanho ekutanga epamutemo ekutora bhizinesi rako kuenda padanho rinotevera uye rakakosha kana kukwidza mari kuchikosha. Mumwe mushambadzi weSavvy anoongorora bhizinesi modhi uye chinzvimbo, uye oona iyo "inc." mushure mebhizinesi rako sechiratidzo chekuti bhizimusi ibasa rakakomba uye rakakodzera kudyara kwake. Iri idanho rakakoshesesa pakuita kuti varimari vanzwe vakasununguka uye vanyatsofungisisa nezvekudyara mari mubhizinesi rako!
Companiesinc ibasa reLawyers Limited. Maona Magweta limited wongororo.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa muna Chikunguru 23, 2021